Auto mvura pombi
Hexagonal bhandi (kaviri V-bhandi)
Raw Edge V-bhandi
Washing machine bhandi
Welcome to Zhejiang Kavoun Auto Parts Co., Ltd (pakutanga raireva Ningbo Hi-Tech Zone Kavoun Transmission Parts Co., Ltd)
boka redu iri nyanzvi mugadziri uye ekisipota kuti muchina nemhepo zvikamu uye hutachiwana mabhandi. Pashure pemakore anopfuura gumi okukura, vanopfuura gumi nevaviri ematunhu nemaguta dzakatangwa kupa rokutengesa nehoro pamwe wevanamakanika nyanzvi uye nyanzvi rokutengesa zvikwata, uye vane simba michina kukura simba. Takapfuura ari ISO9001: 2000 yepamusoro utariri hurongwa advertising uye rakatangwa ari TS16949 yepamusoro utariri hurongwa mureza.
The chikuru zvibereko kambani vari "KAVOUN" uye "XIAOHUOBAN" muchiso HNBR Timingbelt uye CR Timingbelt, kaviri madziro Gear synchronous bhandi, shanduka kumhanya V bhandi, motokari V bhanhire, motokari nguva bhanhire, bhanhire achikanganisa Multi, sungisa vhiri, synchronous bhandi vhiri, bhanhire vhiri, pombi, wiper, Wrapped V-bhandi, uye dzimwe hutachiwana zvikamu. Vakawanda kushandiswa motokari, muchina chokushandisa, Whitehead Textile, fodya, petrochemical, zvokudya, dzemagetsi maturusi kavha, mhuri midziyo yemagetsi, zvimbambaira, injiniya michini nezvimwe maindasitiri.
Zvibereko vekwedu vanoonekwa ne mukuru ano, high quality, hwakanaka, kuchembera nemishonga, ngura nemishonga, mukuru tembiricha nemishonga, chitarisiko, Zvinokosha zvakaisvonaka uye hunogara uye zvichingodaro. Yatakawana mukuru kurumbidzwa vatengi uye vakatengesa rose.
Kubva musi wokuberekwa kwayo, kambani yedu, vanobatisisa tenet kuti "kukurudzira budiriro nesayenzi uye ruzivo rwokugadzira zvinhu, vachitora unhu sezvo chinokosha uye mutengi hwakavakirwa", anovandudza mweya "kutsungirira, utsanzi uye kirasi yokutanga". Kuburikidza zvokugadzira zvinhu utsanzi, utariri utsanzi uye kutsvakurudza uye pave pakakwirira uye itsva michina zvigadzirwa, kambani dzose anovandudza mabikirwo zviri chigadzirwa, uye ari kambani uye kambani. Vatengi kuhwina kupfuura chinopenya mangwana.